‘बहिनी र मेरो दक्षिणामा कम्पिटिसन हुन्थ्यो’Main Samachar
‘बहिनी र मेरो दक्षिणामा कम्पिटिसन हुन्थ्यो’
८ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:५१ प्रकाशित
अभिनेता प्रदीप खड्का । फाइल तस्बिर ।
दशैँमा धेरथोर योजना सबैका हुन्छन् । परिवारसँगै मनाउने । आफन्तकोमा जाने । घुम्न जाने । यस्तैउस्तै ।
तर यसपटकको दशैँ केही फरक बन्दै छ सबैका लागि । कोरोना भाइरसका कारण सीमित घेराभित्र दशैँ मनाउनुपर्ने बाध्यता सबैलाई छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले चर्चित अभिनेता प्रदीप खड्कासँग यसपालीको दशैँ कसरी मनाउने योजना बनाएका छन् ? सोधेका छाैं ।
१) यसपटकको दशैँ कसरी मनाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
विगत २ महिनादेखि अनुप बराल सरसँग क्लास लिन पोखरा आएको छु । टीका भएपनि धेरै ठाउँमा आवतजावत गर्ने कन्डिसन छैन । सोहीकारण म काठमाडौं आउँदिन । हजुरबुवा, हजुरआमालाई भेट्ने कुरा पनि भएन । दशैँमा पोखरामै हुन्छु सायद ।
२) खल्लो हुने भयो नि दशैँमा परिवारसँगै नहुँदा ?
फेमिली डिस्ट्यान्स त भएको छैन । जो आउट अफ भ्याली हुनेहरुलाई राम्रो टाइम त हुन सक्ला दशैँको लागि तर यसपालि कोरोना कारणले गर्दा त्यो पनि कमै मात्र सम्भावना छ । जति सके नभेटे कै राम्रो । घरमा मिस नै होला जस्तो लाग्दैन ।
३) यसअघिको दशैँ कस्तो हुन्थ्यो ?
हजुरबुवा, हजुरआमाको हातबाट टीका लगाइन्थ्यो । मामाघर जान्थें । आउट अफ भ्याली रिलेटिभ्स पनि नभएकाले भ्याली भित्रै हुन्थें म ।
४) दशैँ प्रायः लाई खास हुन्छ । तपाईंलाई चाहिँ कत्तिको स्पेशल लाग्छ दशैँ ?
बच्चामा स्कुल बिदा हुन्छ भनेर राम्रै लाग्थ्यो । पछिल्लो समय काममै बढी फोकस हुनुपर्ने भएकाले प्रायः सुटिङ नै परिरहन्छ । खुसी नै लाग्छ दशैँमा जे होस् ।
४) दशैँमा एककिसिमको सपिङको माहोल हुन्छ । दशैँलाई नै भनेर सपिङ गर्नुहुन्छ कि नाइँ ?
छैन, छैन । म आफैं पनि त्यति धेरै सपिङ गर्दिन अन्य समयमा पनि । दशैँलाई नै भनेर सपिङ गरेको छैन ।
४) दशैँमा दक्षिणाको आश त पक्कै भइ नै हाल्छ । अहिलेसम्म धेरै दक्षिणा कलेक्सन भएको कुनै दशैँ याद छ ?
पछिल्लो ५/७ वर्ष त खास वास्ता छैन । तर, सानोमा हुँदाको याद आउँछ । बहिनी र मेरो दक्षिणाको एकदम कम्पिटिसन हुन्थ्यो । मामाघरतिर त मैले पनि पाउँथें । घरतिर सानोमा पाएपनि अलि ठूलै भएपछि नपाउने । उल्टो आफूले दिनुपर्ने । सानोमा हुँदा धेरै त होइन ५ सय १ हजारसम्म हुन्थ्यो ।
५) दशैँको सम्झनलायक कुनै क्षण ?
दशैँमा पिङ खेल्ने बेलामा माथिबाट खसेको छु । बच्चाबेलामा पिङ मच्चाएर माथि पुर्‍याउँदा वाहवाही पाइन्थ्यो नि त । तर माथिबाट खसें । लाजको अनुभूति भाथ्यो ।